Count Masters အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.8 | 50,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် APK（92.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Count Masters: Crowd Clash & Stickman running game
အကောင်းဆုံးဂိတ်ကိုရွေးချယ်ပါ, ၎င်းကိုဖြတ်သန်းသွားပါ, ဆန့်ကျင်သောလူအုပ်နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောလူအုပ်နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရန် stickman စစ်သူရဲများကိုအတူတကွစုစည်းပါ။ လူအစုအဝေးရှင်သန်လာပြီးဤမော်ကွန်းပြိုင်ပွဲမကုန်မီလူစုဝေးရာမြို့တစ်မြို့မှတစ်ဆင့်သင့်လူများကို ဦး ဆောင်ပါ။ အတားအဆီးများကို crash လုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်လူတိုင်းကိုရိုက်နှက်ခြင်း, ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်း။ သင်၏အဆင့်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။ နောက်ဆုံးစစ်ပွဲတွင်ဘုရင်ကပ်လျက်ကိုအနိုင်ယူပြီးရဲတိုက်ကိုယူပါ။
Masterers သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲများဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တစ် ဦး တည်းစစ်ပွဲကိုတစ် ဦး တည်းစတင်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြတယ်။ မင်းကိုအထီးကျန်တယ်လို့ခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူး သင်သည်ဂိုဏ်းတိုက်ခိုက်မှုများနှင့်တုတ်ချောင်းသမားတိုက်ပွဲများပြည့်နှက်နေသောတောက်ပသောကမ္ဘာတွင်စုပ်ယူရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးပြေးဂိမ်းတစ်ခုကစားရန်နာရီပေါင်းများစွာကစားရန်အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပါ။ ငါတို့သည်ငြီးငွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်: သင်ကတိပေး!
ပြောင်းလဲနေသောပြိုင်ပွဲ။ သင်ဟာရိုးရှင်းတဲ့အပြေးသမားတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် stickmen တစ်ခုလုံးလူအုပ်ကြီးရဲ့သူဌေးက။ သင်၏ဂိုဏ်းကိုစုဆောင်းပြီး၎င်းတို့အားသူတို့၏ဘ0၏အဓိကပ cl ိပက္ခသို့ပို့ဆောင်ပါ။
ပညာရေးလည်ပတ်ချိန်။ သင်၏အသင်းရှိအပြေးသမားများအားရေတွက်ခြင်း, တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မြှောက်ပါ။ ညာဘက်ဂိတ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအမျက်ဒေါသထွက်သောစတစ်ကာများတိုက်ပွဲများကိုအနိုင်ယူပါ။
ပျော်စရာပြိုင်ပွဲ 3D Gameplay ။ ရိုးရှင်းသော, လက်တွေ့နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း။ အားလုံးကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်အကြွေစေ့အလုအယက်၏မာစတာဖြစ်လာပါ။
အခက်အခဲများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အတူ။ သင်စိန်ခေါ်မှုများစွာနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ သို့သော်မစိုးရိမ်ပါနှင့် - သင့်ရဲ့ stagman လူအစုအဝေးကခါးသီးသောရန်သူတွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့သင့်ရဲ့ stickman လူအုပ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ Master သည်လူတိုင်းအတွက်လူတိုင်းအတွက်ပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခုနှင့်လူတိုင်းအတွက်အေးမြသောအချိန်လူသတ်သမားဖြစ်သည်။ ယခု၎င်းကိုယခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ သင်၏နေ့စဉ်စိုးရိမ်မှုများမှလွတ်မြောက်ရန်နာရီပေါင်းများစွာမှလွတ်မြောက်ရန်!
ဘာအသစ်လဲ Count Masters: Crowd Clash & Stickman running game 1.31.4
- Implementedanew mode of construction and development of your own island;
- Added sending units to war for additional income;
- Added new game currency crystals;
- General game improvements;
- Game balance update;
- Minor bug fixes for better user experience.
Count Masters: Crowd Clash & Stickman running game I All levels Mobile Gameplay Walkthrough level 72
Count Masters: Crowd Clash & Stickman running gameplay Walkthrough part 1 @Lucifer nani
Count Masters: Crowd Clash & Stickman running game(1)
android Game top